Christmas comes early with Lipton Japan + Miranda Kerr
Infection Risk Posed By Cats
[VIDEO] Khir Toyo - Dari Bekas Menteri Besar Dah Jadi Seorang Pendusta Besar
ဒီကနေ့ မိုးသီး … မနက်ဖန် ကျနော်တို့လား
Independence at 55: Form over substance by Commander (Rtd) S THAYAPARAN, formerly of the Royal Malaysian Navy
OK To Call Disabled Athletes Brave?
Malaysia is still among the world's best economies
Thai TV discussion in English: Daw Aung San Suu Kyi’s silence on Ethnic Cleansing of Rohingya
Myanmar Monks Hold Disguised-Protests Against President U Thein Sein
Burma’s Buddhist Chauvinism
Bangkok Post:Intolerant Myanmar
After "charming" Japanese consumers earlier this year, tea maker Lipton [Jp] is working with Australian model Miranda Kerr again forasimilarly wicked commercial for the Limone ice lemon tea withagolden Santa theme…
Christmas comes early with Lipton Japan + Miranda Kerr from YeinJee's Asian Journal
Cats harbour the parasite
say more awareness is needed aboutadisease spread by cats after
figures show an estimated 350,000 peopleayear in the
Posted: 05 Sep 2012 08:16 AM PDT
Posted: 05 Sep 2012 08:18 AM PDT
It is funny how the two of us get along. We never quite hit it off from the beginning but we grew into each other. The special element which really sealed the friendship for life is certainly her sweet and forgiving nature, not forgetting her strong faith and belief in God. Both of us are very honest with each other and speak our hearts when we relate to each other. I am aware there are some think I am gentle and docile but I assure you I am not. The one thing I cannot stand in life would be hypocrites and/or liars and have always stayed clear of such connections once I know trust and honest cannot be part of the foundation ofagenuine friendship.
Source: ဒီကနေ့ မိုးသီး … မနက်ဖန် ကျနော်တို့လား
အခုတလော ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေ၊ ဖတ်နေရတဲ့စာတွေကြောင့် အမျက်တွေစူးတယ်။ သတင်းသမားပီပီ စာရေးချင်၊ ပြောချင်ပေမဲ့ ကိုယ့်စာကအလိုမကျတာ၊ အမြင်မတူတာကိုချရေးပြီး၊ ဆူးပေါက်နေမှာမို့ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် နေလိုက်သေး တယ်။ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံ အတွေးအမြင်ကို မြိုချလို့ရပေမဲ့ အဆိုးဘက်နွယ်တဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ စာတွေပိုပိုများနေတာ
ကျတော့ မျက်ကွယ်ပြုထားသလို စိတ်ထဲခံစားလာရတယ်။ သတင်းသမားတယောက် တာဝန်မကျေသလို ဖြစ်မှာစိုးလို့
ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာ ကွယ်ဝှက်လည်းမနေ၊ ဟန်ဆောင်ပြီးလဲ ထိန်းမနေချင်တော့ဘူး၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ရေးလိုက်တော့ မယ်။ဒီရက်ပိုင်းသတင်းတွေထဲမှာ ထိတ်ဆုံးကလှုတ်ခတ်တဲ့ သတင်းက ပြည်ပရောက် ABSDF ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဟောင်းတချို့နဲ့ အမေရိကားက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ ၈၈ ကျောင်းသားတချို့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးဖြစ်တယ်။ အမှန်တော့
သူတို့ မသွားခင်ကတဲက အပြင်မှာ ပူညံပူညံအချင်းများနေတာ။ ပြည်ပရောက်ကျောင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသွား မှာလား?၊ ဘယ်သူ့ကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ ဘယ်သူနဲ့တွေ့၊ ဘာတွေဆွေးနွေးမှာလဲ? နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဆက်ဖမ်း ထားသလို၊ ပြည်တွင်း ၈၈ အုပ်စုတွေက ပြည်ပကျောင်းသားတွေ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လာနိုင်ရေးလုပ်နေချိန်၊ ဒီလိုခွဲခြား ပြီး သွားသင့်သလား? ကချင် စစ်မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နေတဲ့ ဒီလိုကာလသွားသင့်ရဲ့လား?၊ အပြင်မှာ လုပ်စရာကုန်ပြီ လား? စတဲ့ စတဲ့ မေးခွန်တွေကို အင်တာနက်ချပ်တင်တွေ၊ အွန်လိုင်း Meetingတွေ၊ Debate တွေနဲ့ အချိန်အတော်ကြာ လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိထားပါတယ်။
ကျနော် ကိုမိုးသီး၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုမူးသာတို့နဲ့ မေးမြန်းကြည့်ရသလောက် သူတို့ဟာ ပြည်ပရောက်၊ ဘယ်အဖွဲ့၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကိုယ်စားမပြုဘူး၊ မိမိကိုယ်ကို တာဝန်ယူမှု၊ ကိုယ်စားပြုမှုနဲ့ပဲ သွားမှာလို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့ ကိုယ့်ဖာ သာကိုယ်တာဝန်ယူမှုနဲ့ ပြည်တော်ဝင်ခရီးနှင်တယ်ဆိုပေမဲ့ အားလုံးနီးပါးက ၈၈ကျောင်းသားတွေ၊ ပြီးတော့ တချိန်က၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေပါ။
သူတို့က ပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြော၊ မဆိုင်လို့ မရပါဘူး။ သူတို့သွားတဲ့ခရီးက တခြား နိုင်ငံကို လော်ဘီလုပ်ဘို့သွားတဲ့ ခရီးမဟုတ်သလို၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စသွားကြတာ မဟုတ်ဘူး၊ မိသားစုဝင်တယောက် ယောက် အသဲအသန်ဖြစ်လို့ အရေးပေါ်သွားတွေတာ မဟုတ်ဘူး။
၂၄ နှစ်လောက် ပြည်ပမှာအကောင်းအဆိုးတွေနဲ့ရောပြွန်းနေထိုင်ပြီး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ စစ်ကျွန်ဘ၀က လွတ်မြောက်ရေး၊ ဒီမို ကရေစီရေးအတွက်၊(အောင်မြင်တာ၊ မအောင်မြင်တာအသာထား) လုပ်ခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ မိုးထဲလေထဲမှာ တော်လှန်ရေးနဲ့၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ အင်မတန်တူတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အင်မတန်မနီးစပ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ခဲ့ကောင်းလုပ်ခဲ့
မိုးသီး တို့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့လိုပဲ ပြည်ပရောက် ၈၈ တောခိုသူတွေနဲ့ နောက်ပိုင်းတောခိုလာသူတွေ တိုင်းတပါးနဲ့ နယ်စပ်ဒေသမှာ အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအလုပ်တွေ နေ့နေ့ညည တွေးတော၊ ပြောဆို၊ လုပ်ခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား? တတိယနိုင်ငံတွေရောက်တော့လည်း တဘက်က မိသားစုနဲ့ ၀မ်းစာအတွက် (အသက်တွေ ကြီးပြီး၊ မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလုပ်တွေကို) ပင်ပင်ပမ်းပမ်းလုပ်ရင်း အကြွေးတွေနဲ့ ရပ်တည်နေရတယ်။ တဘက်က ကိုယ်ယုံ ကြည်တဲ့ နိုင်ငံရေးအပေါ်ဆက်လုပ်ရင်း (ကိုယ်မလုပ်တောင်လုပ်နေသူတွေကိုအားပေး၊ ထောက်ပံ့) နေခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာ ဖြစ်စဉ်အမှန်၊ တတိယနိုင်ငံရောက်နေသူတိုင်း ချမ်းသာသူတွေ မဟုတ်သလို၊ ချမ်းသာနေသူတိုင်းကလည်း ပြည် တွင်းက အချောင်သမား ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေလို ဗြုန်းစားကြီးကြီးပွားခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ချွေးတွေ၊ လေ့လာမှု တွေ၊ သီးခံစိတ်၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယတွေနဲ့ အားထုတ်ကျိုးပမ်းခဲ့ကြတာပါ။
ငယ်ရွယ်ပြီး၊ ပညာသင်နိုင်တဲ့ ပြည်ပရောက် တော်လှန်ရေးကျောင်းသားတွေက ဆက်ပြီးပညာသင်နိုင်ပေမဲ့၊ အသက်အ ရွယ်ရလာမှ တတိယနိုင်ငံရောက်သူတွေက မနိုင်ဝန်ထမ်း၊ အများတကာမလုပ်ချင်တဲ့၊ ကိုယ်လည်းစိတ်မ၀င်စားတဲ့ အ လုပ်တွေကိုလုပ်ရင်း မိသားစုဝမ်းစာနဲ့ သားသမီးတွေစနစ်တကျ ကြီးပြင်းနိုင်ဘို့ ပေးဆပ်နေရတယ်။ ဒါကိုယ်တွေ့။ ဒီနေ ရာမှာ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူတွေ မဟုတ်တဲ့၊ ပြည်ပမှာအခြေစိုက်နေထိုင်တဲ့ သာမန် မြန်မာပြည်ဘွားညီအကိုတွေကို
ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ အဲလို သာမန် ကိုယ့်နိုင်ငံသားပြည်သူတွေတောင် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကို တတ်စွမ်းသ လောက် အားပေးကူညီပြီး ပါဝင်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ပြည်ပရောက်တိုင်းအချောင်သမားတွေ မဟုတ်ဘူး။
ကိုမိုးသီးတို့၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ မှားတာမှန်တာ အပထား၊ သူတို့စွန့်လွှတ်ခဲ့တာ၊ အနစ်နာခံခဲ့တာ ကိုယ်နိုင်ငံအ တွက် အချိန်တွေပေး၊ လေ့လာကြတာ၊ ပြောဆိုကြတာ၊ အာရုံနှစ်ပြီး လှုပ်ရှားနေတာကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုပေးရမယ်။
အတိတ်က သူတို့မှားခဲ့တာကို သူတို့ခံရမှာပဲ။ ဒါမငြင်းလိုဘူး။ သူတို့မှားလို့ တစုံလုံးခံခဲ့ရတာတွေလည်း မငြင်းလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့၊ လူဆိုတာ အမြဲတန်းမမှားနိုင်သလို၊ မှန်အောင်ကျိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူတွေကို ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ ဆွဲခွာ ထုတ်ပယ်တာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူး။ အပြစ်ရှိရင်လည်း အများကပစ်ထားမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကိုမိုးသီးကို ကျနော်စကားပြောဖူးတယ်၊ ခင်ပါတယ်၊ ဒီနေ့အထိ လူချင်းမဆုံဖူးဘူး။ ကိုမိုးသီး အတွေးအခေါ်တိုင်းလဲ ကျနော် မကြိုက်ဘူး။ သူ့အတွေးအခေါ်ကြောင့် ကျနော်တို့တတွေ ဒုက္ခရောက်ဖူးတယ်။ ဥပမာ သူ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူခဲ့စဉ် ABSDF ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်တခုဖြစ်တဲ့ "တော်လှန်ရေးသည် ငါတို့ကျောင်း၊ ငါတို့တက္ကသိုလ်" ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံကို သ ဘောကျမိလို့ အရွယ်ကောင်းစဉ် လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပြုပညာတွေ မသင်ခဲ့ဘဲ၊ လက်နက်ကိုင်နယ်ပယ်နဲ့၊ Activist လှုပ်ရှားတက်ကြွသူဘ၀ထဲမှာ တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်ပြီး ဘ၀တွေမရေမရာဖြစ်သွားကြတာ မနည်းဘူး။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူး ဒေလီမှာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေအဖြစ် ရပ်တည် နေထိုင်စဉ်က ကိုယ့်ထက်ငယ်ပြီး ပညာသင်ဘို့ကောင်းတဲ့ အသက်၂၀ ကျော် လူငယ်တွေကို ပညာသင်ဘို့တိုက်တွန်းတော့ "တော်လှန်ရေးဟာ ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်ပဲဗျ" လို့ ထိထိမိမိဆင်ခြေပေးပြီး အတွေးခေါင်သွားသူတွေအမှန်ပဲ ရှိခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့မှာ မှန်ကန်တဲ့သ ဘောတရားတွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ပညာတတ်ကေဒါတွေ မမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
မှတ်မိတဲ့ဆောင်ပုဒ်တခုရှိသေးတယ်။ "ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေကို မျက်လုံးအိမ်သဖွယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြ" ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံဆောင်ပုဒ်။ ကျနော်တို့အတော်ရွံခဲ့တဲ့ ဆောင်ပုဒ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ ABSDF က ဘယ်တုန်းကမှ မပတ် သက်ခဲ့သူတွေ၊ အိန္ဒိယအခြေစိုက် ABSL အဖွဲ့ကပါ။ အကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးပဲလုပ်ခဲ့တယ်။ နယ်မြေဒေသကွဲသလို၊ အိုင်ဒီ ယာလည်း ကွာတယ်။
ကိုမိုးသီးတို့အတွေးအခေါ်မကြိုက်ရင် ကျနော်တို့ သူ့နောက်မလိုက်ဖို့ဘဲရှိတယ်။ သူ့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေထိုးနှက်တိုက် ခိုက်ပြီး ဂုဏ်သရေမဲ့ သိက္ခာကျအောင် စော်ကားစရာမလိုဘူး။ ဒါလူယဉ်ကျေးအလုပ် မဟုတ်ဘူး။
ABSDF မြောက်ပိုင်းသတ်ဖြတ်မှုကို အကြောင်းပြုပြီး သူတို့ပြည်တော်ဝင်ချိန်နဲ့ အချိန်ကိုက် သတင်းစာရှင်းပွဲတွေ၊ သတင်း ဂျာနယ်အင်တာဗျူးတွေ လုပ်တာတွေ့ရတယ်။ လုပ်သင့်တာလုပ်တာပဲလို့ ယူဆတယ်။ အမှန်တရားဆိုတာ တခါတခါ သူ့အလိုလို ပေါ်တတ်တာမဟုတ်၊ ပယောဂတွေနဲ့ ဖုံးကွယ်နေတတ်တယ်။ ဒါကို သတိ၊ ၀ီိရိယနဲ့ အားထုတ်ဖော်ထုတ် ရ တာတွေ ရှိတယ်။ ဒါကိုလက်ခံတယ်။ ကိုမိုးသီးတို့၊ ကိုနိုင်အောင်တို့ ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီကိစ္စကိုရှောင်လွှဲနေတာ မဟုတ်ဘူး၊ ရင်ဆိုင်နေတာပဲ။
၁၉၉၃ လောက်ထင်တယ်၊ ကိုနိုင်အောင် အနောက်ဘက်ဒေသမှာ ABSDF အလံစိုက်ဘို့ ရောက်လာတယ်။ကျနော်တို့က မြန်မာကျောင်းသားများအဖွဲ့ နာမည်နဲ့ နယူးဒေလီမှာ မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလုပ်ကြတယ်။ အိန္ဒိယအစိုးရ၀န်ကြီးတချို့နဲ့၊ အ မတ်ဟောင်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့ NGO အဖွဲ့တချို့၊ သတင်းစာသမားတွေ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေက အားပေး တယ်၊ ကျနော်တို့လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံကူညီတယ်။ ပြောချင်တာက စစ်ရေးထက် နိုင်ငံရေးကို အိန္ဒိယပြည်တွေက အားပေးနေတဲ့အချိန်။ မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မှာ တိုင်းရင်းသားသူပုန်အဖွဲ့တွေ (ချင်း၊ ရခိုင်၊ ဇိုမီး) အဖွဲ့တွေရှိတယ်။
အိန္ဒိယအစိုးရ ထောက်လှမ်းရေးတို့၊ စစ်တပ်တို့နဲ့ အဲဒီတိုင်းရင်းသားသူပုန်လက်နက်ကိုင်တွေ သိပ်ကင်းလို့မရဘူး၊ တ နည်းပြောရရင်မလွတ်လပ်ဘူး၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဟာ အိန္ဒိယမှာမကြီးထွားနိုင်ဘူး၊ ရေခံမြေခံမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ ကိုနိုင်အောင်လာတော့ ရှင်းပြတယ်။ သူက လက်မခံဘူး၊ နယ်စပ် (ဒုက္ခသည်စခန်း၊ မဏိပူ) ကို အခြေခံပူးပေါင်းဘို့ သူ လာတာ။ ဒေလီနိုင်ငံရေးအင်အားစုနဲ့ ပူးပေါင်းနိုင်တာမနိုင်တာက သူ့အတွက် အရေးမပါဘူး။ သူ့အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်က အနောက်ဘက်ဒေသ (အိန္ဒိယ) မှာ လက်နက်ကိုင်ကျောင်းသားတပ် (ABSDF) ဖွဲ့နိုင်ဘို့ပဲ။ ထားပါတော့ ဒီကိစ္စပြောရရင် ရှည်တယ်။
ပြောချင်တာက သူလာတုံးက မြောက်ပိုင်းကချင်မှာ ထောက်လှမ်းရေးဆိုပြီး လုပ်ကြံမှုတွေဖြစ်ပြီးခါစ ပူပူနွေးနွေး။ နယူး ဒေလီက ကျနော်တို့ရုံးမှာပဲ ကိုနိုင်အောင်နဲ့ ကျနော်တို့ ဒီကိစ္စအငြင်းပွားတယ်။ ကျနော်တို့နဲ့ နယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ တဖွဲ့တည်း အတူနေခဲ့တဲ့ ထိန်လင်း (ပန်းချီထိန်လင်း) ထောက်လှမ်းရေးစွတ်စွဲခံအုပ်စုထဲပါသွားတာကို သူထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ပြီး စစ်အစိုးရသတင်းစာမှာပါလာမှ ကျနော်တို့ သိလိုက်တယ်။ ထိန်လင်းက ကျနော်တို့နဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိသလို၊ စိတ်တူကိုယ်တူတွေ၊ စခန်းထဲက နံရံကပ်တို့၊ အနုပညာကိစ္စ၊ ဖြော်ဖြေရေးကိစ္စတွေ တူတူလှုပ်ရှာ ခဲ့ကြတာ။
သူပြည်ထဲဝင်သွားပြီး မြောက်ပိုင်းဘက်သွားတယ်လို့နောက်ဆုံးကြားတယ်၊ အဆက်ကလုံးဝပြတ်နေတာ။ နောက်တော့ ဗြုံးကနဲထောက်လှမ်းရေးအသွင်နဲ့ သတင်းထွက်တော့ ကျနော်တို့ လုံးဝလက်မခံဘူး။ ကိုနိုင်အောင်ကို ခါးခါးသီးသီးငြင်း တယ်။ မြောက်ပိုင်းသူလျိုကိစ္စဟာ မှားယွင်းလုပ်ကြံမှုလို့ ပြောပြတယ်။ ကိုနိုင်အောင်ဘက်ကလည်း ရေလှိုင်းစစ်ဆင်ရေး တို့၊ စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ချက်တို့ ဘာတို့နဲ့အသေအချာ ရှင်းပြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က လက်မခံဘူး။ နောက်ဆုံး ကိုနိုင်အောင်က "ဒီကိစ္စသမိုင်းကပေးတဲ့အပြစ်ဒါဏ်ကို ကျနော်ခံပ့ါမယ်" လို့ ကတိပေးပြီး အငြင်းအခုန် အဆုံးသပ်သွား တယ်။
နောက်ပိုင်းတော့လည်း ကျနော်တို့တတွေ ရင်းရင်းနှီးနှီးအလုပ်တွဲလုပ်ကြတယ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားလူ ငယ်များကွန်ဂရက် SYCB ကိုတောင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လက်တွဲပြီး နယူးဒေလီမှာဘဲ (၁၉၉၆) က လူငယ်တပ်ပေါင်းစု တရပ်အနေနဲ့ ဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်။ မြောက်ပိုင်းကိစ္စ မမေ့ပေမဲ့ ဘုံရန်သူကိစ္စ အရင်ရှင်းကြတယ်။
တချိန်က ကျနော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူရဲ့အမွေကို ဒီနေ့ကြံ့ဖွတ်အစိုးရက အမွေဆက်ခံထားတာပါ။ န၀တ၊ နအဖစစ်အစိုးရ ခေတ်ရော၊ ဒီနေ့ကြံ့ဖွတ်အစိုးရကရော၊ ကျူးလွန်လာခဲ့တဲ့ လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှု၊ ခြစားမှု၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအလွဲသုံးစားမှု၊
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊ ဒီပဲရင်းလုပ်ကြံမှု၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှု၊ နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှု၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းမှု၊ …ဘာအမှု၊ ညာအမှု နံပါတ်စဉ်တပ်လို့ မကုန်နိုင်အောင် အမှုပေါင်းမြောက်မြားစွာ ကျူးလွန်ခဲ့ကြတာလည်း မမေ့သင့်ဘူး။
အခုဟာ ဆန်ရင်းနာနာဖွတ် ဆိုသလို၊ နိုင်ရာဖိထောင်းနေတာက တဘက်သတ်ပွဲကြီးလို ဖြစ်နေတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွေက အတော်ရုပ်ပျက်တယ်။ ရိုင်းစိုင်းတယ်။
အဆိုးဆုံးက ပြည်တွင်းမီဒီယာတခု (သတင်းရောင်းစားတဲ့ မီဒီယာ) က အယ်ဒီတာအမျိုးသမီးတယောက်က မိုးသီးဇွန် တို့အဖွဲ့ မြန်မာပြည်ခရီးဆိုပြီးရေးတာကိုဖတ်ရတယ်။မိုးသီးဇွန်အဖွဲ့ ပြည်တော်ဝင်တာကို စိတ်အခံမကောင်းစိတ်နဲ့ ရိတိတိ စော်ကားရေးထားတယ်။ ညီညွတ်ရေးအမြင်နဲ့ မကြည့်ဘူး။ နိုင်ငံသားမဟုတ်တော့တာကို အပြစ်လိုပြောတယ်၊ (နအဖ လေသံ) အောက်က ကွန်မင့်တွေက ပိုရိုင်းတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရအဖွဲ့တွေလောက်တောင် စာနာစရာမ ကောင် တဲ့ဟန်၊ ပြည်ပရောက်တွေက အသုံးမကျသူတွေလိုမြင်အောင်ရေးကြတယ်။ ထားပါတော့
စစ်ကျွန်တွေ၊ ကြံ့ဖွတ်လူတွေက ဒီလိုဝင်နှောက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာ မို့ကွန်မင့်တွေအကြောင်း သိပ်မပြောလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကာလ (အသွင်ကူးနေတဲ့ စပ်ကူးမတ်ကူးကာလ) ထားစေချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတော့ လက်တို့ပြောပြချင် တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ပြည်သူတွေညီညွတ်ရေး အသဲအသန်လိုနေတဲ့ ကာလပါ။ ဆောင်းပါးပဲရေးရေး၊ သတင်းရေးရေး၊ အပြုသဘောနဲ့ စိတ်ရင်းမှန်မှန်ထား ရေးစေလိုတယ်။ အခုဟာ သမိုင်းမသိ၊ ဘာမသိသလိုပဲ၊ အဆိုးမြင် မျက်မှန်စိမ်း တပ်ပြီးရေးနေတော့ ဖတ်ရတာစာက ကောင်းမလာဘူး။
တကယ်တော့ ကိုမိုးသီးတို့အဖွဲ့က ရန်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ နှိမ့်ချရေးစရာမလိုတဲ့ လူတွေပါ။ သူတို့ နိုင်ငံခြားသားခံထားတာ လည်း အခြေအနေအရပါ။ အချိန်မရွေး ကိုယ့်နိုင်ငံသားဖြစ်မဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားပေမဲ့ မြန်မာပြည် သူတွေကို သစ္စာမဲ့နေတာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ အကောင်းဆုံးတခုခုပေးချင်တဲ့ စေတနာနဲ့လာသူတွေလို့ အပြု သဘောနဲ့ မြင်သင့်တယ်။
သေချာတာက သူတို့ဟာ NGO တွေ၊ ပရောဂျက်တွေ၊ ပရိုပိုဆယ်တွေနဲ့ လုံးထွေးပြီး ကိုယ်ကျိုးတ၀က်၊ ကိုယ့်အလုပ်တ ၀က်နဲ့ ဗမာပြည်ထဲဝင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းယောင်ယောင်၊ နိုင်ငံရေးပရောဟိတ်တွေ ယောင် ယောင်၊ နိုင်ငံရေးပွဲစားယောင်ယောင်၊ မီဒီယာယောင်ယောင်၊ အဖွဲ့မဟုတ်ဘူး။ မိုးသီးတို့အဖွဲ့ဟာ ကိုယ့်ထမင်းကိုစားပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာပါ။ ပြည်တွင်းမှာ တခုခုလုပ်နိုင်အောင် အရဲစွန့်ဝင်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီခရီးအတွက် သူတို့ဟာလေး၊ ငါး၊ ခြောက်လလောက် အပြင်က ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ စကားစစ်ခင်းသွားခဲ့ရတာ၊ တချို့အပြင်က ရဲဘော်တွေက သိပ် ကြည်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က ရှေ့ပြေးကင်းတွေလို သဘောထားတယ်။
သူတို့ပြန်လာရင် အခြေအနေအားလုံး နားစွင့်ကြအုံးမှာပါ။ မိုးသီးဇွန်တို့က နယ်စပ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ကားတ၀ီဝီစီးပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ NGO အထောက်အပံ့နဲ့ ပြည်တော်ဝင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့က အစောကပြောသလို မိုသီးဇွန် နောက်လိုက်လည်း မဟုတ်သလို၊ မိုးသီးဇွန် ဘာလုပ်လုပ်ထောက်ခံသူလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်သဲ ဆိတ်ရင်တော့ လက်ထိတ်နာတယ်။ သူတို့နဲ့ ကျနော်တို့ မျိုးဆက်အတူတူ ဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုဆဲရင် ကိုယ့်ကိုလည်း ဆဲနေ သလိုပဲ၊ ကိုယ့်မျိုးဆက်ထဲက သိကြသူတွေဆဲတာဆိုတာ နားကြားကောင်းနေသေးပေမဲ့၊ ဘုမသိ ဘမသိ၊ သမိုင်းကြောင်း လဲမသိ နားမလည်သူတွေက အသားလွတ် ၀င်သမတာတော့ အတော်စော်ကားတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ။
အခု ကိုမိုးသီးတို့ပေါ် အဆိုးမြင်တွေနဲ့ ရေးနေသူတွေကရော စစ်အစိုးရအောက် ပြားပြားမှောက်စဉ်ကာလတွေက ဘာ များလုပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာ ပြန်ဆန်းစစ်သင့်တယ်။ ၁၉၈၈ ကာလ က တပါတီအာဏာရှင်စနစ်က မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက် ဗြောင်တိုက်ခဲ့ကြ၊ ဓားဓားချင်းလှံလှံချင်း ရင်ဆိုဘို့ဆိုပြီး နယ်စပ်ထွက်ခဲ့ကြ၊ ဆင်းရဲကြ၊ ငတ်မွတ်ကြ၊ ရန်သူစစ်တပ် သတ်လို့ သေတာကတမျိုး၊ ကိုယ့်မဟာမိတ် တိုင်းရင်းသားသူပုန်ကသတ်လို့ သေတာကတဖုံ၊ ကိုယ့်အချင်းချင်းသတ်လို့
သေတာကတမှောင့်။ ကြုံလို့ပြောရမယ်။ အခု မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုကမှ အရိုးတွန်ပြီး ပြန်ပေါ်လာသေးတယ်။ ကျနော် တို့တတွေရဲ့မဟာမိတ်ကရင်နဲ့ ချင်းတွေသတ်လို့ သေတာကြောင့် အရိုးတွေဆွေးပြီး မတွန်နိုင်၊ မကနိုင်တဲ့ ခွတ်ဒေါင်း အရိုးတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ ဥပမာ အိန္ဒိယနယ်စပ် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ ကျန်ဖိုင်းဒုက္ခသည်စခန်းကို လာခိုလှုံတဲ့ မြန်မာ ကျောင်းသားတွေထဲက ကိုကြည်အောင်(ရန်ကုန်)နဲ့ ကိုမြသောင်း(ကလေးမြို့) တို့ကို အဲဒီက ချင်းလက်နက်ကိုင် CNF က ၁၉၉၀ အစောပိုင်းမှာ စပိုင်ထောက်လှမ်းရေးလို့စွတ်စွဲပြီး ရက်ရက်စက်စက် မြေမြှုပ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီကနေ့ အချိန်ထိတောင် မိသားစုတွေ သူတို့သားတွေပြန်လာမလားလို့ မျော်နေသလားမသိ။
နောက်တခုက ကိုနိုင်အောင်တို့လာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ကိုလှဌေး ဦးဆောင်တဲ့ ABSDF (အနောက်ပိုင်း) က ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ မြန်မာနယ်စပ်ကနေ မီဇိုရမ်နယ်ထဲအ၀င် ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း ကိုဝင်းထွဋ် နောက်ကျောကျည်ဆံမှန်ပြီး ကျသွားတယ်။
အချင်းချင်းလုပ်ကြံတာလား၊ မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့က လုပ်ကြံတာလား ဒီနေ့ထိ မသိရဘူး၊ ကိုဝင်းထွဋ်မှာဇနီးနဲ့ သမီးလေး ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ ကရင်နယ်မှာအများကြီး၊ တောခိုကျောင်းသားတွေ၊ ဆရာဝန် လောင်း၊ အင်ဂျင်နီယာလောင်းနဲ့ ပညာတတ်တွေတောထဲမှာ စစ်မတိုက်ရဘဲ နောက်ကျည်ဆံနဲ့ ကျဆုံးသွားသူတွေ မနည်းဘူး။ (ဒါတွေစနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်တယ်)
အဲလို.. ၈၈ ကျောင်းသားတွေဟာ တချိန်ကဘ၀တွေစွန့်ပြီး စနစ်တခုရဲ့ပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်တဲ့တာဝန်ကို ပုခုံးပေါ်နိုင်သ လောက်တင်ထမ်းခဲ့ကြတာပါ။
ဟိုးတချိန်က တောခိုကျောင်းသား၊ ပြည်ပြေးတွေကို သူရဲကောင်းလို့တောင် ပြည်သူတွေကသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာ မဟုတ် ဘူးလား။ ဒီနေ့အထိ အဲဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ တောထဲမှာ ဒုက္ခခံရပ်တည်နေတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
ဟိုတုံးက သူရဲကောင်းတွေကို အခုအချိန်ကျမှ သစ္စာဖောက်တွေလို မဆက်ဆံသင့်ပါဘူး။
အခုပြည်တော်ပြန် ကိုမိုးသီးတို့အဖွဲ့ဟာ တချိန်က စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဒီကနေ့ကြံ့ဖွတ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေလောက် ပြည်သူအပေါ် ဘိုကျနှိပ်ဆက်မဲ့သူတွေ မဟုတ်သလို၊ ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေလိုလည်း အတ္တလွန်ကဲ စီးပွားရှာနေမဲ့ သူ တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တဆုတ်စာ NGO အကြိုက်လုပ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့၊ မီဒီယာအဖွဲ့တွေကြောင့် အမှန်တကယ် ယုံကြည် ချက်နဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသူတွေ ဘေးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ တော်လှန်သူတွေ နာမည်ပျက်ခဲ့တယ်။ ပိုဆိုးတာက တော် လှန်ရေးကြီးတခုလုံး အကြော်သည်လက်သုတ် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဟိုကတည်းက NGO တွေနဲ့ ပလူပလဲလုပ်သူတွေ၊ ငွေကြေးအရင်းအမြစ် ကိုင်ထားသူတွေကိုပဲ အထည်ကြီးပျက် ကြံ့ဖွတ်အစိုးရက တော်ကောက်ထားတယ်။ မြှောက်စားထားတယ်၊ သွေးခွဲထားတယ်။ ဒါကိုအခွင့်အရေးသမား၊ နိုင်ငံရေး
ကျပ်မပြည့်တွေက သိရက်နဲ့ အချောင်နှိုက်တယ်။ ဒီကနေ့ ကျနော်တို့လျှောက်နေတဲ့ခရီးဟာ အလွန်သိမ်မွေ့ပါတယ်။
အားပြိုင်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ အပြုဝါဒီတွေနဲ့ လမ်းဟောင်းဝါဒီတို့ လွန်ဆွဲနေပါတယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း အင်အား ပြိုင်နေသလို၊ စီးပွားရေးနယ်ပယ်၊ NGO လောက၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်နဲ့ မီဒီယာလောကထဲမှာပါ အင်အားပြိုင်တာ၊ စား ကျက်လုတာ၊ ခွက်စောင်းခုတ် ခြေထိုးကန်ကြောက်တံတောင်နဲ့တွက်နေတာကို အပြင်ကနေတောင် ကြားရမြင်ရတာပါ။
လတ်တလောလေးတင် ဆရာကြီးဒဂုံတာရာက "ကျနော်တို့တိုင်းပြည်၌ ဒီမိုကရေစီပန်းနုရောင်ကလည်း သန်းစအချိန် ဖြစ်ပါသည်၊ ထိုသို့သော ဒီမိုကရေစီပန်းနုရောင်ကာလတွင် အချင်းချင်းမေတ္တာဖြင့် တဦးနှင့်တဦး ယုံကြည်ရလောက် သော အနေအထားများဖြင့် ဆက်ဆံကာ မြန်မာပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် အလေးထားလုပ်ဆောင်ရန် မေတ္တာရပ်ခံပါ သည်။ ယခုကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီနုနယ်သောအချိန်တွင် လှေကိုမလှုပ်အောင် လူးအောင်မလုပ်ဖို့ အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံပါ သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ကာလများ အတွေ့အကြုံအရ ယခုကာလကို စိုးရိမ်စွာစောင့်ကြည့်နေရသော အချိန်ဟု ကျွန်တော် ယူဆ ပါသည်။ ၂၀၁၅ ထိအခြေအနေ တည်ငြိမ်ချောမွေ့အောင် ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြ" လို့ ပြည်သူတွေကို တိုက်တွန်းထားပါ တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ကိုမိုးသီးတို့ ပြည်တော်ပြန်တာဝမ်းသာအားရ ကြိုဆိုသင့်ပါတယ်။ ရန်သူအားပေး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ပြည်တွင်း ရှစ်လေးလုံးနိုင်ငံရေးအင်အားစုထဲမှာတောင် ကိုမိုးသီးဇွန် ကို လေဆိပ်သွားကြိုဖို့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်တယ်ကြားတော့ ကျနော် တို့ အတော်လေးအံ့သြသွားတယ်။ စိတ်လည်းပျက်သွားတယ်။ ဒီကိစ္စ မဲခွဲရမဲ့ကိစ္စလား? အဲလောက်အထိ ဖြစ်သင့်သ လား၊ အထဲက အင်အားစုတွေကိစ္စ အပြင်အင်အားစုတွေ မျက်စိမှိတ်ထောက်ခံခဲ့တယ်။ ညီအကိုတွေလို မြင်တယ်။ ကျနော် ခိုင်ခိုင်လုံလုံ သိရတဲ့သတင်းအရ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမြအေး တို့က သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် လေဆိပ်သွား ကြိုမဲ့ကိစ္စတောင် မဲရှုံးလို့ ငယ်သူငယ်ချင်းကိုတောင် မကြိုလိုက်ရဘူးတဲ့၊ ထူးဆန်းအံ့ဘွယ် သတင်းပဲ။
လေဆိပ်သွားကြိုဘို့ ကိစ္စတောင် မဲခွဲနေရသတဲ့လား? ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ? ကျနော်တို့ နွားတွေတော့ တကောင်ချင်း ကွဲနေပါပြီ။ ကျားဟိန်းသံလည်း ကြားနေရတယ်။ တောကလည်း နက်ပါတယ်။ အချိန်ကလည်း ညီအကိုမှန်းတောင် မသိတသိ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ၀ါရင့်စစ်ဘိုရှုတ်တွေက အခုဆို အကွက်ကျကျနဲ့ ပြည်ပမီဒီယာတွေ၊ ဒီမိုကရေစီဘန်းပြ NGO တွေ၊ ပရောဂျက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဆီက အဆက်အသွယ်နဲ့၊ အရင်းအမြစ်တွေ အရယူနေပါတယ်။ မုဆိုးစိုင်သင် လုပ်နေပါတယ်။ ပြည်ပ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို ခါးလည်ကပိုင်းလိုက်ပါပြီ။ သူတို့က၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုင်ပြီး အပေါ်စီးက နေ ကစားနေတာပါ။
မင်းသားစရိုက်အမျိုးမျိုးကို တယောက်ပြီးတယောက် ထုတ်ရှိုးပြီး ဒီတကွေ့မာလိုက်ဟောက်လိုက်၊ ဟိုတကွေ့ ပျော့လိုက် ချော့လိုက် လုပ်နေပါတယ်။ တချိန်က ကျနော်တို့ဘက်တော်သားတချို့နဲ့ ပုလင်းတူဗူးဆို့ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကိုမိုးသီးတို့ ပြည်တော်ပြန်အုပ်စုကို ပင့်လိုက်၊ မြှောက်လိုက်၊ ရိုက်ချလိုက်နဲ့လုပ်နေတာ သိပ်မလှပါဘူး။ ကျနော်တို့တ တွေ ညီညွတ်ရေးအမြင်နဲ့ ခရီးဆက်ဘို့လိုပါတယ်။ အားလုံးဟာ တပင်ကိုတပင်ယှက်နေတာပါ။ ကိုမိုးသီးတို့၊ ကိုနိုင်အောင် တို့နဲ့ ကချင်မြောက်ပိုင်းကိစ္စလိုပဲ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ၊ ပြည်ပရောက်ကျောင်းသားတွေ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိပြန် နိုင်ရေးကိစ္စလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီနေ့ ကိုမိုးသီးတို့ကို ဆဲနေတယ်။ မနက်ဖြန် ကျနော်တို့ ပြည်ပရောက်တွေကို ဆဲလိမ့်မယ်။ ဒီကနေ့ ကိုမိုးသီး တို့ကို စော် ကားနိုင်တယ်ဆို၊ မနက်ဖြန် ကျနော်တို့ကိုလည်း စော်ကားပါလိမ့်မယ်။ ညီညွတ်ရေးအမြင်၊ မဟာမိတ်အမြင်မရှိရင် ကျနော်တို့ ကျဆုံးမယ်။
၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂
Posted: 05 Sep 2012 05:55 AM PDT
Posted: 05 Sep 2012 08:01 AM PDT
Posted: 05 Sep 2012 04:00 AM PDT
"The proverb warns that, 'You should not bite the hand that feeds you.' But maybe you should, if it prevents you from feeding yourself." - Thomas Stephen Szasz
COMMENT For some, Merdeka day was the day we matured asanation. For others, it was marred by political one-upmanship and the disgraceful behaviour of certain celebrants. Unfortunately, the truth rarely rests somewhere in the middle. Never forget when it comes to politics, the middle is all about compromise. For the past 55 years, we lived with moderation and tolerance. If you are non-Malay, you were told to be grateful to the hosts of this land for being allowed to live here in peace and harmony. The so-called social contract (sic),anebulous figment of political imagination, was conflated with certain elements of the Malaysian constitution which then become the barometer of how racial relations were governed in this country.
This Merdeka day celebrations was the harbinger of the shape of things to come. What it demonstrates is that 'Janji Ditepati' has fallen apart and the Umno centre cannot hold. Foracertain section of the Malaysian voting public, it wasajubilant moment of redefining the Malaysian centre from one of appeasement and tolerance to that of unity in racial and economic diversity, and the hope ofamore egalitarian way of Malaysian life. Understand now, that I think the 'opposition' is not there yet in fulfilling those expectations, seeing as how they are playing the same race game but foracertain section of the ordinary rakyat who believes in that 'hope', it wasanight of brotherhood and affirmation that the tsunami of 2008 wasawatershed moment that heraldedanew Malaysian dawn.
Predictably Umno stayed true to form. The events leading up to Merdeka eve was the usual partisanship of Umno/BN malfeasances and Pakatan Rakyat showboating. From hijacking the national day theme to alternate slogans, the whole thing wasashadow play of self-serving politics masquerading as patriotism. Of course, since our history is that of the manufactured kind, most people seemed more interested in form than substance. I have always been deeply sceptical of shows of patriotism because mostly it's jingoism inacheap dress, but this year there was an undercurrent of genuine sincerity of love of country.
Foracertain section of the Malaysian polity, it was more than justaday of remembering independence from colonialism but it was also day of declaring independence from Umno hegemony.
For others who view the current political discord as something of an aberration in Malaysian politics - in every country in the world political differences are the norm but here in Malaysia, after years of Umno/BN haranguing its considered anathema - it wasanight that the 'opposition' hijacked an event which was supposed to be an opportunity for national unity for political mileage.
The fact that Umno for one night could not bring these two opposing forces together inasymbolic show of national unity is just further evidence that the first step foranew Malaysia is for the people to get used to the idea thatatwo-party alliance competing for stewardship of this country is the panacea for years of BN rule.
Bear in mind that this is not an endorsement of Pakatan (although admittedly I amareluctant partisan) merely my belief that the first step for all of us (pro-BN and pro-Pakatan) to progress after years of apathy is to practise the most basic of democratic principles -achange of leadership. Merdeka eve provided much amusement. Take this whole mooning pictures of our glorious leader and his wife tempest inatea cup. The term "biadap" (how I loathe that term seeing as how it is loaded which the usual Malaysian hypocrisy that passes as "values") has been thrown about to describe the action of the dumb kid who found it necessary to make an arse of himself by exposing his ass.
Commenters in Malaysiakini and elsewhere either praise the action as the frustrated howl ofayoung person appalled at the excess of the Umno regime or heap scorn on him as someone who is rude and out of Malaysian character. For the former, spare me the uber liberal chest thumping of freedom of speech/expression and thumbing the nose at authority. It was an example of both, but it isadumb example at best which tarred the better example of those attending the event despite the fact that the rally was declared "illegal" and the always present threat of violence when it comes to defying this regime.
And thank you Tok Guru Nik Aziz Nik Mat for pointing out that engaging in such acts "... is not the work of Malays and Muslims. "This is very shameful and saddening, the photograph that I saw was not of Malay (the perpetrators of the act). We Muslims are taught not to disturb others. If others do it to us, we will get angry."
Perhaps Tok Guru was not furnished with pictures of those Malay/Muslim university students who engaged in an orgy of hate against the LGBT (lesbian, gay, bisexual and transsexual) community, certain opposition personalities and social activists, burning and shredding pictures and engaging in the most hateful of rhetoric. And then of course, there are the never ending disruptions by Perkasa and their ilk of opposition ceramahs. Remember folks, the red paint on the bus is probably the work of "biadap" non-Malay/Muslims because it's not in the culture of the Malays to engage in such activity.
And this exemplifies the hypocrisy of the latter when it comes to the action of that dumb kid. Pro-regime blogs have drawn attention to the "jambu-ness" of the dumb kid, which fits in nicely with the homophobic narrative and the disdain of the 'other' which Umno peddles, which is more often than not ignored by the so-called inclusive majority of Pakatan.
Arresting the mooning kid when there areaslew of politically motivated acts of disruption against Pakatan which goes unnoticed should be embarrassing to the PDRM but as is, it is just business as usual forapolice force compromised by Umno. There really is nothing more to say except to see how it plays out forakid who got caught up in the heat of the moment while the outsourced thugs of Umno are free to spread their hate, secure in the knowledge that the Umno state will never liftafinger against them, all part of 'janji ditepati', I suppose. This is why when an example ofatrue spirit of Merdeka is presented to Malaysian partisans in the form of those four transsexuals challenging Islamic doctrine in the courts, it is met with silence or hate.
Honestly, what they are doing (dare I say it?) takes cojones and to me is an act of defiance against the established social order, and regardless of one's views on sexuality and gender,ahardcore example of fighting for one's rights. If this does not exemplify the spirit of Merdeka, I don't know what does.
But what really made the night memorable for me are those kids who hoisted the Sang Saka Malaya flag. Not only were they drawing attention to the history of this country which has been deliberately buried, they were also challenging the ideological status quo by reminding anyone who bothered to look that the 'Malay' polity was neveramonolithic entity made up entirely of Umno or PAS.
Now that, my friends, are symbolic gestures worthy of praise depending on your political bent. The fact that the PDRM and the home minister are painting this episode in the bright Umno colours of political subversion - hey it is - and accusations of flag changing (so what if it is) just proves that BN will manufacture any controversy on the filmiest of foundations to fire up the indignation of its supporters in the hopes that this would translate to legitimacy. I have written about the destruction of the Left by Umno/BN but what is really was, was the destruction of the idea ofapolychromatic Malay community and the creation of the myth of the monolithic Malay community under siege by the avarice of the non-Malay "pendatangs".
What those kids managed to do was forabrief moment remind Malaysians that there has always beenadiversity of opinion in the Malay community and the Malaysian political and social landscape, and that is where our possible salvation lies. Merdeka foralong time wasarote exercise with everyone going through the motions either in apathy or secure self-entitlement. For the first time in decades, people were forced to question their own beliefs and put in the hard work of actually committing to principles they took for granted or to which they only paid lip service.
With all the controversies and the bickering, with all the partisanship and acrimony, Malaysians for the first time no matter which side of the political divide they were on, were confronted with the reality that people have different ideas of how best to chart the future of this country.
The greatest thing about Merdeka this year was that for the first time since Independence, it truly was about something. Malaysiakini
Posted: 05 Sep 2012 04:04 AM PDT
"Saya sudah malas nak ulas panjang sikap samseng Umno. Mahathir pun dah kata, Umno itu parti syaitan, jadi orang-orang dia pun perangai macam syaitanlah.
"Saya tak pelik kalau orang-orang Umno berperangai seperti samseng, tapi saya lagi pelik kalau mereka tidak berperangai samseng," katanya ketika dihubungi.
Dengan memakai kemeja-T Umno dan Barisan Nasional, mereka memegang kain rentang sambil menjerit menyebut 'Jalur Gemilang' dan mengeluarkan kata-kata kesat terhadap Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Posted: 05 Sep 2012 01:00 AM PDT
BBC ONLINE:4September 2012
the Paralympic Games started, the media earnestly discussed the words
that should and shouldn't be used. It can beacurious area.
One thing that tends to draw disabled people
Posted: 05 Sep 2012 12:19 AM PDT
Falling four rungs to 25th in the Global Competitiveness Report (GCR) 2012-2013 does not put Malaysia in the stream of losers. Considering the 'near perfection' of the report, the country is still among the world's strongest and vibrant economies and among the top 10 in Asia-Pacific region, much placed than China and India.
The GCR by the World Economic Forum (WEF) based in Geneva covers 144 countries still ranked Malaysia as among the top 20 per cent of the most competitive economies.
We have also been upgraded to the transition range of development from Efficiency-Driven Stage towards Innovation-Driven Stage of Development, based on our GDP per capita increase to US$9,700 from US$8,423 previously.
(Also read Rocky's Bru)
In other words, the 25th ranking does not reflect significant downward trend to its major sectors although some may need re-adjustment and stronger push.
Maintaining its score of 5.1, the most notable advantage is found in the country's efficient and competitive market for goods and services and its remarkably supportive financial sector, as well as its business-friendly institutional framework.
Inaregion where many economies suffer from the lack of transparency and the presence of red tape, Malaysia stands out as particularly successful at tackling those two issues. Yet, despite the progress achieved, much remains to be done to put the country onamore solid growth path, according to the report, released today.
Of course, the Opposition and its media will capitalise on the rank issue but they need to know that the countries that overtook Malaysia - South Korea, Luxembourg, New Zealand and United Arab Emirates - are exercising massive development and infrastructure plan. However, in terms of economic growth, we still fared better.
Malaysia's competitive strengths - apart from its efficient and competitive market for goods and services, which ranked 11th - are in the areas of legal rights index (1st), pay and productivity (4th), government services for improved business performance (new indicator, ranked 4th), investor protection, agriculture policy costs and government procurement of advanced technology products (4th) and extent of staff training (7th).
Others are burden of government regulation and the ease of access to loans (8th), financing through local equity market (9th), business impact of rules on FDIs (10th) and efficiency of legal framework in challenging regulations (10th).
Nevertheless, the report noted some factors that had adversely affected Malaysia's competitiveness, mainly in the areas of government budget balance and debt, health, crime and technological readiness.
These are women in labour force (119), government balance budget (110), redundancy costs, weeks of salary (108), secondary education enrollment rate, gross percentage (103), general government debt in terms of percentage of GDP (100) and malaria cases per 100,000 population (86).
Most alarming are broadband internet subscription per 100 population (68th) and mobile broadband subscription per 100 population (64th).
This factor, together with the lack of progress in the country's focus in promoting the use of ICT, will significantly undermine Malaysia's efforts to becomeaknowledge-based economy by the end of the decade, or in other words, in attainingafully-developed nation by the year 2020.
13. Taiwan, China
Posted: 05 Sep 2012 01:33 AM PDT
Posted: 04 Sep 2012 09:58 PM PDT
Posted: 04 Sep 2012 09:25 PM PDT
Source: Burma's Buddhist Chauvinism ByWILLIAM MCGOWAN
Violence against the Rohingya revealsadeep-rooted xenophobia.
Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi extols Buddhism asasource of personal strength, allowing her to endure 15 years of house arrest at the hands of Burma's generals. Buddhist precepts such as loving kindness and compassion can also guide Burma's democratic transition, she says, by fostering reconciliation with the military.
Yet Burma's Buddhist tradition also hasanationalistic and at times hateful side, as the violence since June against Rohingya Muslims in the western state of Rakhine demonstrates. A sense of racial and religious superiority among majority Burman Buddhists has poisoned relations with the 40% of the population made up of non-Burman minorities.
This enmity has not only fueled civil war, it could pull the country's political reforms off course. The military is using the Rohingya issue to build its popularity with Burman and Rakhine Buddhists. This puts Ms. Suu Kyi in an increasingly difficult position.
Buddhist monks protest against the Rohingya minority.
The anti-Rohingya violence, some of it committed by Buddhist mobs and some by the Buddhist-dominated security forces, led to scores of deaths, the burning of settlements andarefugee exodus of 90,000 into neighboring Bangladesh. There, up to 300,000 Rohingya refugees still languish in makeshift camps from the last anti-Rohingya pogrom 20 years ago—part of what the United Nations calls "one of the world's largest and most prominent groups of stateless people."
According to the U.N., the Rohingyas, who number about 800,000, are "virtually friendless," subject to forced labor, extortion, police harassment, restrictions on freedom of movement, land confiscation, inequitable marriage regulations,ade facto "one child" family policy, and limited access to jobs, education, and healthcare. A 1982 law denies them citizenship, based on the presumption that they are illegal immigrants from Bangladesh, even though many have lived in Burma for generations.
There's also their darker skin color, which makes them "ugly as ogres" by comparison to the "fair and soft" complexion of Burmans, according to the Burmese consul general in Hong Kong in 2009. Burmese President Thein Sein has said that the "solution" to the Rohingya problem is to put them into U.N.-administered internal camps, or expel them.
Many in Burma's pro-democracy community hold similar views, including leading figures in Ms. Suu Kyi's National League for Democracy. Ko Ko Gyi, who was imprisoned for his strategic role in the 1988 student uprising and now functions asamentor to younger democracy activists, called the Rohingya "terrorists" who infringed on the country's sovereignty. Like other opposition figures, Ko Ko Gyi denied that the Rohingya should be counted among the nation's 135 recognized "national groups." NLD spokesman Nyan Win simply said: "The Rohingya are not our citizens."
Monastic opposition to the government, which boiled over in the 2007 "Saffron Revolution," has posedasignificant challenge to the military's popular legitimacy by depicting it as an enemy of Buddha sasana, or righteous moral rule. The regime has tried to deflect that challenge by finding outside enemies, stressing that Buddhism is the religion of "true Burmese" and its purity is under threat. The result isaBuddhist majority that might rally behind Ms. Suu Kyi and the monks for greater democratic rights, but is less keen about extending those same rights to others.
As the violence against the Rohingyas played out, the newly "liberated" Internet was filled with racist invective. Usingapejorative for dark-skinned foreigners, one commenter declared, "We should kill all the Kalars in Burma or banish them, otherwise Buddhism will cease to exist." A nationalist group set upaFacebook page entitled "Kalar Beheading Gang," which attracted 600 "likes" by mid-June.
In Europe to receive her belated Nobel Peace Prize when the Rohingya crisis peaked, Aung San Suu Kyi was likeadeer caught in headlights. When asked if the Rohingya should be treated as citizens, she answered. "I do not know," followed by convoluted statements about citizenship laws and the need for border vigilance. Nowhere did she or the NLD denounce either the attacks or the racist vitriol that followed them, or express sympathy for the victims.
According to some analysts, Ms. Suu Kyi's reluctance to speak out reflected concern for her own parliamentary district, where anti-Rohingya feeling runs high. Others note the fierce racism of Buddhists in Rakhine,astate that playsakey role in the NLD's wider electoral strategy.
The pinched response left many observers downcast. Journalist Francis Wade, who has followed the democratic transition in Burma closely, wonders whether Western observers have "overromanticized" the struggle between the NLD and the junta and if the pro-democracy movement ever had the "wholesale commitment to the principle of tolerance" many presumed.
The stakes are high. If ethnic and religious tensions long held in check by military authoritarianism boil over, Burma could easily become another Yugoslavia. The specter of "disorder," which the military has long invoked to justify its heavy hand, could lead it to slow the pace of reform or even roll it back. In 1962, minority unrest, largely provoked by the establishment of Buddhism as the state religion, providedapretext for the military coup that led to 50 years of isolation.
As Ms. Suu Kyi herself wrote ina1985 monograph on the Burmese "racial psyche," Buddhism "represents the perfected philosophy. It therefore follows that there [is] no need to either to develop it further or to consider other philosophies." In trying to forgeasense of national identity inanation that has never known one, that attitude isahuge obstacle.
Posted: 04 Sep 2012 09:10 PM PDT
Source: Intolerant Myanmar
But it has some serious problems to overcome. The new government's approach to drug lords and trafficking is discouraging. The rule of law remains as opaque as during the bad years of military dictators. But arguably, no issue illustrates the vast amount of catching up required by the new Myanmar regime than the treatment and attitude towards the Rohingya people.
The recent communal violence in western Myanmar's Rakhine state should have served asawakeup. Instead, Myanmar officials have pandered and even participated inacontinuing campaign to vilify and demonise the Rohingya. The government itself, including President Thein Sein, blame the killings, destruction and ill feelings on the very existence of the Rohingya people.
The riots themselves, now three months old and continuing sporadically, showaserious, deep-seated problem among different nationalities. Many countries and regions have had similar problems. In today's world, at least, Myanmar's leadership is unique. But Thein Sein has takenahard line _ not against the violence, and not against the instigators of murderous attacks. Rather, the president claims that the Rohingya are largely to blame for being illegal outsiders.
Instead, from President Thein Sein on down, there has only been positive support for the clerical bigotry. Indeed, the Mandalay monks claimed to be supporting the stand by the president. The president even told the United Nations envoy for Myanmar in July that it was "impossible to accept the illegally entered Rohingya, who are not our ethnicity".
Such xenophobia and intolerance is no longer acceptable in today's world. Ethnic conflicts do exist in Asean countries, but not to the near-ethnic cleansing level as in Myanmar. Other Asean countries do recognise the need to integrate groups who are different from the majority. Cambodia has Muslims, Malaysia has Hindus and the Philippines has Buddhists _ to pick three obvious examples of societies where minority ethnic and religious groups contribute to the nation. And one wonders what the other nationalities of Myanmar think of their president's words _ the Karen, the Shan, the Kachin and so many others.
The Rohingya of Myanmar are mostly born and unanimously resident of that country. President Thein Sein has no legal authority and no moral standing in claiming they must be deported or imprisoned. International law, religious teachings and common decency all reveal the president's weak claims.
The following questions have made their rounds in the net but the inspiring prose is something refreshing. I hope you can spendafew minutes to read it and pass it on to your friends if you have found value in it. Take care and havealovely day!
1 - Name the5richest people in the world.
2 - Name the last5Miss Universe winners.
3 - Name the last 10 Nobel Prize winners.
4 - Name the last 10 winners of the Best Actor Oscar.
1 - Name3teachers who contributed to your education.
2 - Name3friends who helped you in your hour of need.
3 - Think ofafew people who made you feel special.
4 - Name5people that you like to spend time with.
The people who mean something to your life are not rated "the best", don't have the most money, haven't won the greatest prize.....
You are not among the most "famous", but among those with whom I remember to send this message.......because you read my blog :-).
They stopped and came back ........ All of them
And the applause lastedavery long time.........
If you share this story, perhaps we will succeed in changing our heart, perhaps someone else's heart, as well.......
A candle loses nothing if it is used to light another one."
So, if this has inspired you....pass it on. Haveanice day!
Posted: 04 Sep 2012 06:57 PM PDT
My due date has come to pass and I'm still playing the waiting game. I can't believe I have surpass the Week 40 mark and I guess not many women can tell their future children this statement "I was carrying you over 40 weeks!"
Having said that, I really, really, really pray that Annakate will come on her own as I do not want to be medically induced. I really don't like the idea of having pitocin or cervadil being injected into me. They cause longer hours of labor and may cause horrible contractions as compared to natural labor.
Alright, Annakate, Listen to mummy here. I am hereby giving you an eviction notice to get out of my uterus or else I will start charging you daily rental rates of deducting toys.